स्वास्थ्य सेवाका सयौं कर्मचारीको सरुवा- आवश्यक परेको ठाउँमा अझै अभाव ! « News24 : Premium News Channel
स्वास्थ्य सेवाका सयौं कर्मचारीको सरुवा- आवश्यक परेको ठाउँमा अझै अभाव !
काठमाडौं, २० भदौ । स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत १ हजार ७ सय ३८ कर्मचारीको एकैपटक सरुवा गरेको छ । दुई दिनको बीचमा ११८ जनाको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट र १ हजार ६ सय ३८ जनाको विभागबाट सरुवा भएको हो । बिभागले कर्मचारी सरुवा आवश्यकता हेरेर गरेको बताए पनि सरुवामा ठूलो चलखेल भएको कर्मचारीहरु बताउछन् ।
चिकित्सक माग गरिएको सम्बन्धमा
बिषय राखेर जिल्ला अस्पताल रसुवाको लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय रसुवाले मिति २०७५ भदौ ८ गते स्वास्थ्य सेवा बिभागलाई बुझाएको पत्र हामीले बुधबार स्वास्थ्य सेवा बिभाग पुग्दा अलपत्र रुपमा भेट्यौ । आवश्यकता भएको ठाउँमा चिकित्सक लगायत कर्मचारी पठाएको भनेको बिभागले यसरी दुर्गमका अस्पतालहरुले नै कर्मचारी अभाब भयो भन्दै पठाएको पत्रको चरम बेवास्ता पनि हो यो । यो साता मात्र स्वास्थ्यका १ हजार ६ सय ३८ कर्मचारीको सरुवा गरिए । जस्लाई स्वास्थ्य बिभागले आवश्यकता हेरी कर्मचारी खटाएको दाबी गरेको छ ।
आवश्यक ठाउँमा चिकित्सक लगायत कर्मचारी पठाएको दाबी गर्ने विभागले दुर्गम जिल्लाका जिल्ला अस्पताल मै भने चिकित्सक लागायत कर्मचारी पठाएको छैन । तर आवश्यक नै नभएको सुगम ठाउँमा भने आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी पठाएको छ ।
धनुषाको महेन्द्रनगर प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा ५ जना डाक्टर छन् । जहाँ डाक्टर फुर्स्दिला छन् । त्यस्तै सिराहाको कल्याणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि दरबन्दी भन्दा धेरै ४ जना डाक्टर छन् । पर्बत र गोर्खा वालिंग पोखराका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आवश्यक भन्दा धेरै डाक्टर छन् तर रसुवा जिल्ला अस्पताल ,कटारी अस्पताल उदयपुर ,कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताल,डडेल्धुरा उपक्षेत्रिय अस्पताल लगायतमा भने चिकित्सकको अभाबले बिरामीले ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
रसुवा जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक अभाब छ भने १ जना मात्र नर्स छन् । त्यस्तै कटारी अस्पताल उदयपुर १ जना डाक्टरको भरमा चलेको छ । नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरुको रोजाई पनि बिरामी खचाखच आउने जिल्ला अस्पताल भन्दा फाट्टफुट्ट बिरामी आउने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नै पर्ने गर्छ । यसरी कम बिरामी आउने ठाउँमा गए पढ्न पाइने र कार्यअवधि पनि सजिलै सकिने हुँदा उनीहरुले सोर्स लगाएरै पनि आफ्नो अनिकुल ठाउँमा जाने गर्छन ।
यो बर्ष मात्रै १३७ छात्रवृत्ति का चिकित्सक लाइ करारमा बिभिन्न ठाउ पठाईएको छ तर त्यस्तै बिभिन्न अस्पतालमा कार्यरत छात्रवृत्ति का चिकित्सकहरुले सोर्स लगाएरै सरुवा लिएका छन् जसले गर्दा आवश्यक ठाउमा भन्दा पनि रोजेको ठाउमा चिकित्सकहरु पुगेका छन् ।
ठूलो संख्यामा सरुवा हुँदा धेरै सरुवा विवादित पनि बनेका छन् । दरवन्दी नै नभएका ठाउँमा समेत सरुवा गरिएको छ । नेकपा र मधेशी जनाधिकार फोरम निकट कर्मचारी सुगम र आकर्षक ठाउँमा परेको भन्दै कर्मचारी सरुवामा मन्त्रालय र बिभागका कर्मचारीको चलखेल रहेको कर्मचारीहरु नै बताइरहेका छन् ।